Global Voices teny Malagasy » Global Voices sy UNESCO hiaraka hiasa hamorona fitaovana fikatrohana nomerika ho fampiroboroboana ny fiteny ety anaty tambajotra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Marsa 2021 16:33 GMT 1	 · Mpanoratra Global Voices Nandika Sylvia Aimée
Sary fanaingoana avy amin'i Adriana García ary nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Amin'ny alàlan'ny hetsika Rising Voices  ato aminy, ny Global Voices dia faly milaza aminareo ny fiarahana miasa vaovao amin'ny UNESCO  ho famokarana fitaovana fanabeazana misokatra ho an'ireo Vazimba Teratany sy ireo vondrompiarahamonina hafa mampiasa fiteny vitsy an'isa na tsy misy mpanohana ka mikatsaka ny hiditra ao anatin'ny media nomerika sy hampiasa ireo fitaovana voatahiry ao anaty aterineto amin'ny hetsika ataony ho fampahafantarana ny fitenin-dry zareo.
Araka ny Fanambaràn'ny Firenena Mikambana momba ny Zon'ireo Vazimba Teratany , iray amin'ireo fepetra fototra ho amin'ny fizakantena tanterak'ireo mponina teratany ny zo ho afaka maneho hevitra an-kalalahana sy hahazo torohay amin'ny fitenin-dreniny. Ny fitahirizana ny fahaveloman'ireo fiteny teratany dia ahafahana mitahiry sy miaro ireo fahalalàna nentindrazana, izay mazàna no miseho amin'ny endrika lovantsofina, ary mandritra izay fotoana izay ihany koa dia ahafahana mitahiry ireo kolontsaina sy maripanondroana an'ireo vondrompiarahamonina vazimba teratany.
Iray amin'ireo fomba entin'ireo vondrompiarahamonina mampihatra ireny zo ireny ny fampiasàna ireo media nomerika sy ireo fitaovana voatahiry ety anaty aterineto. Amin'ny fakàna tombony amin'ireo fitaovana takatry ny fahefa-mividy kokoa sy ny fitomboan'ny fahafahana miditra anaty tambajotra, tanjon'ireo vondrompiarahamonina ny hanitatra ny isan'ireo olona iantefàn'ny votoaty vokariny amin'ny fitenin-dreniny sy ny fahafahan'izy ireny maka torohay ary fahalalàna vokarin'ny hafa, hatramin'ny fahafahan'izy ireo mifandray amin'ireo tahaka azy any anaty vondrompiarahamonina hafa.
Atao laharam-pahamehana amin'ity fironana ity ireo mpikatroka nomerika ho an'ny fiteny izay mampiasa ny fomba fanao hoe “ianao-ihany-manao-azy” mba hamoronany votoaty nomerika, fanentanana ety anaty media sôsialy, fitaovana fanabeazana ety anaty tambajotra, ary sehatra fifandraisana. Ny fanahy mibahan-toerana ao amin'ireo mpikatroka ireo dia ny fifampizaràna— traikefa, fahalalàna sy izay niainana.
Na izany aza anefa dia misedra mandrakariva andiana sakana henjana marobe ireny vondrompiarahamonina ara-piteny ireny mba hahafahany mampiasa araka izay tratra ny aterineto sy ny media nomerika ho fampahafantarany ety anaty tambajotra ny fitenin-dry zareo. Tafiditra amin'izany ireo sakana tsy ahafahana miditra, hatramin'ireo fanamby ara-teknika, teknôlôjika, fiteny, sosialy sy kolontsaina, ary na ny araka ny lalàna sy ny ara-politika aza.
Ny vaovao tsara dia nandray an-tànana ny marobe tamin'ireny fanamby ireny reo mpikatroka nomerika manerana izao tontolo izao, izay mandrafitra tetikady mahomby mety ho azo rasina sy ampifanarahana amin'ny zavamisy sy toejavatra manokana iainan'ny vondrompiarahamonina hafa. Mba hanomezana topimaso midadasika kokoa amin'ireo singa isankarazany tafiditra amin'ny famoronana tetikasa sy fanentanana nomerika dia ho ampidirina ao anatin'ireo loharano io ireo lesona sy fomba fanao tsara indrindra.
Tsy natao ho torolàlana ho arahana isan'andininy ilay fehezam-pitaovana; fa, hanome tondrozotra ho an'ny asa fikatrohana nomerika izay hiarahana mamorona miaraka amin'ny fiarahamiasa akaiky amin'ireo tambajotra-na mpikatroka efa misy sy vaovao, ary ireo mpiara-mitantsoroka hafa, raha mitohy kosa ny fanomanana ny Taompolo iraisampirenena natao ho an'ireo fiteny teratany 2022-2032 .
Tamin'ny famoronana ity loharano ity ho an'ireo mpikatroka nomerika efa misy sy vao mipongatra, ny fifanomezan-tànan'ny Global Voices sy ny UNESCO dia mamaly ny fandrisihana iray voalaza tao anatin'ny Los Pinos Declaration [Chapoltepek]  nomanina nandritra ny lanonam-pamaranana faratampony ny hetsiky ny UNESCO tamin'ny 2019- Taona Iraisampirenena ho an'ireo Fiteny Teratany :
“Fampahafantarana ireo tambajotrana mpikatroka nomerika ahitàna ireo mpikatroka nomerika sy ireo tompondakan'ny fampianarana ary ny fianarana ireo fiteny teratany, ary koa ny fifanakalozana ireo fomba fanao tsara indrindra mifandray amin'ny fampiasàna ny teknôlôjia.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/03/10/151838/
 Fanambaràn'ny Firenena Mikambana momba ny Zon'ireo Vazimba Teratany: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
 Taompolo iraisampirenena natao ho an'ireo fiteny teratany 2022-2032: https://en.unesco.org/news/upcoming-decade-indigenous-languages-2022-2032-focus-indigenous-language-users-human-rights
 Los Pinos Declaration [Chapoltepek]: https://en.unesco.org/news/pinos-declaration-chapoltepek-lays-foundations-global-planning-international-decade-indigenous
 2019- Taona Iraisampirenena ho an'ireo Fiteny Teratany: https://en.iyil2019.org/